Gudoomiyihii Guddiga Xalinta Khilaafaadka, C/laahi Abyan oo lagu aasay Muqdisho | Dhacdo
Gudoomiyihii Guddiga Xalinta Khilaafaadka, C/laahi Abyan oo lagu aasay Muqdisho
Alle ha u naxariistee Gudoomiyihii Guddiga Xalinta Khilaafaadka Doorashooyinka Heer Federaalka, Cabdullaahi Abyan Nuur ayaa maanta lagu aasay Magaalada Muqdisho.
Marxuumka ayaa saacadihii dambe ee Jimcihii ku geeriyooday magaalo madaxda dalka ee Muqdisho.
Gudoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaalka, Maxamed Xasan Maxamed (Cirro) iyo masuuliyiin kale ayaa ka qaybgalay aaskaasi.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska, qaraabada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed, ee uu ka baxay Alle ha u naxariistee Gudoomiye Cabdullaahi Abyan Nuur.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in marxuumku uu u soo adeegay dalkiisa iyo dadkiisa, isaga oo soo noqday Wasiir, Xildhibaan iyo Gudoomiyaha Guddiga Xallinta Khilaafaadka Doorashooyinka Heer Federaal, oo uu hadda hayay.
“Innaa Lillaahi Wa Innaa Ilayhi Raajicuun. Alle ha u naxariistee Marxuum Cabdullaahi Abyan Nuur oo muddo u soo adeegayey Qaranka Soomaaliyeed. Geerida ku timid waa mid murugo leh oo taabatay qalbiyadeenna, waxaanna uga tacsiyeynayaa qoyskiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday.” Ayuu yiri Madaxweynuhu.
Madaxweyne Farmaajo ayaa marxuumka Alle uga baryay in uu hoygiisa ka yeelo Jannatul Fardowsa, samir iyo iimaanna uu ka siiyo qoyskiisa iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay.
Cabdullaahi Abyan ayaa xilka Gudoomiyaha Guddiga Xalinta Khilaafaadka loo doortay bishii July ee ina dhaaftay.
Dad rayid ahaa oo ku dhintay gaari uu qarax ku haleelay...
Gaari ay la socdeen afar qof oo rayid ah ayay maanta miinada kula qaraxday deegaanka Buula Xaaji, oo hoos-tagga Magaalada Kismaayo ee...
Hormuud Salaam oo Laptop-yo u qaybisay ardaydii guuleysatay
Wararkii ugu dambeeyay xiisadda ka taagan Boosaaso
Cannaantii Rooble ee Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka oo shaqeysay
12 nin oo Shabaab ka tirsanaa oo Muqdisho lagu dilay
Shiinaha oo mowqif adag ka qaatay arrinta Itoobiya